Home » Freebies » Ihe Mgbakwunye: Kwuputa Ibu Ibu Ibu Ogo nke Keto
Mgbe ahụ gị dị na ketosis, ọ bụ anụ ọkụ na-ere ọkụ maka ike karịa carbs. Na Kara Keto, ị nwere ike inyere aka kickstart usoro a!
Ọbụna ozi ọma karịa ... .Ị nwere ike ịnweta karama Keto ma gbalịa RISK FREE !!!
Kara Keto bụ ihe ntinosis siri ike ma dị ike nke na-enye nri nke ga-enyere aka na ọnwụ, inye aka na-agba isi mmiri ara, na-akwado mma mgbaze na ụra. Nke a bụ ihe ị nwere ahụmahụ na mgbakwunye Keto a:
Biko Rịba ama: Ihe ize ndụ a na-efu n'efu na-enye Keto bottle bụ naanị ma ọ bụrụ na ị nọ na United States.
Ọ bụrụ na ị nọ n'Australia, Canada, Ireland, Singapore, ma ọ bụ New Zealand lelee ihe ize ndụ a na-enye free keto bottle